Kukosha Kwemhando yepamusoro Yemhando Dudziro | Mutemo Makambani Dubai
Kukosha kweshanduro yepamutemo yemhando yepamusoro
Munyika yepamutemo, izwi roga roga rinoita mutsauko. Izvo zvinodikanwa kuti tidzidze kusiyanisa mamwe mazwi kubva kune vamwe sezvo izwi rimwechete rinogona kusarudza mune yetsika tsika. Vadudziri veruzhinji vanowanzo chenjera zvakanyanya pese pavanenge vachiita basa ravanenge vaine mumaoko avo mukana wekushandura mamiriro ese ezvinhu.
Mutsara wakasarudzika unogona kukonzera dambudziko guru
Kukurukurirana kwakanaka pakati pevanhu vese
shanduro dzinotora mukurumbira
Dudziro dzemutemo dzave chikamu chakakosha chenyika mukududzira pakati pemitauro. Uye ivo vanogashira kutariswa zvakanyanya kana tiri kutaura pamusoro pekushandura pakati petsika mbiri dzakasiyana. Kana uchitaura nezve kuwedzera kwebhizinesi, shanduro dzinotora mukurumbira zvakanyanya nekuti munhu wese anofanira kunge ari papeji rimwe chete. Wese munhu anofanira kuziva zviri kuitika uye zviri kutaurwa nezvazvo. Ndiyo chete nzira iyo bhizinesi inogona kubudirira.
taura mutauro mumwe chete
Makambani ane bazi rakakura kubatana nedzimwe nyika, idzo dzinototaura mimwe mitauro, dzinowanzoisa mari yakawanda mumapazi avo ekushandura sezvo zvichikosha kwazvo kuti vataure mitauro imwe uye vachengetedze hunhu nechinangwa chegwaro rimwe nerimwe.
Asi ... zvinogoneka sei kutsanangura chimiro ichi?
Idzi mhando dzekushandura dzinowanzo kuve dzakanyatsojeka uye dzine mamiriro akapararira. Misoro yakafukidzwa yakatsanangurwa sezvazvinogona uye mushanduri wega wega anofanira kufunga izvi kana achigadzira shanduro. Muchokwadi, makambani makuru eUnited Arab Emirates anogara achitora vaturikiri veruzhinji vanokwanisa uye vane ruzivo rwekushanda nezvinhu izvi.
Makambani makuru ekududzira emutemo anogara achitarisa kutarisisa kwavo kwekuwana iro gwaro rakanaka revatengi vavo. Dudziro dzemutemo zvakare dzinoenderana nenyika imwe neimwe uye nekwavo tsika inogona kunge iinayo. Uye ichi chekupedzisira chinhu ndechimwe chinonyanya kukurudzira pakusarudza kana shanduro yepamutemo yakaitwa kana kwete. Chero kukanganisika mune chero gwaro rakashandurwa kunogona kukonzera kukanganisa kana kukanganisa pakati pevaya vanobatanidzwa mumamiriro ezvinhu.
Shanduro dziri pamutemo dzinoda kungwarira kukuru
Chinhu chakakosha kuziva ndechekuti vashanduri vanogona kuzviisa pamutemo zviitiko zvikuru kana zvidiki kukura. Zvese zvinoenderana nemabatiro avanoita basa ravari kuita. Shanduro dziri pamutemo dzinoda chenjedzo huru uye dzinofanira kunge dzakanyatsojeka kuti zvinhu zvese zvakarongeka uye hapana matambudziko nemutemo.
Mutsara wakasarudzika unogona kukonzera dambudziko guru pakati pemapato ese. Zvinogona kugadzira kupesana pakati pevaya vanobatanidzwa kana zvichireva chinhu icho mune imwe tsika chinogumbura. Pakutanga, zvinganzwika senge unopenga asi ivo vanokwanisika kuitika zvinhu izvo zvakatoitika kare.
Zvichida kungwarira kwakanyanya kunogona kutora muturikiri kutora nguva yakareba kuita dudziro. Asi zvakafanira. Kunyatsoteerera neshoko rega rega richazoshandiswa chinhu chisinga gadzirisike uye hachizombove. Muchokwadi, chikonzero chekuti shanduro dzemagwaro dzakadai sezvibvumirano, zvibvumirano, uye zvibvumirano zvinotora nguva yakareba ndeyekuti vashanduri vanofanirwa kuita macheki akati wandei. Pane nguva apo magwaro anoongororwa kanopfuura katatu uye zvikanganiso zvichiri kuwanikwa.
Shanduro yemutemo yakanaka inopfuura zvinodikanwa kuti zvinhu zvese zvive nerunyararo uye zvakarongeka. Pamusoro pezvo, shanduro dzakabudirira zvakanyanya dudziro yemuturikiri, kazhinji achawedzera mukana wake uye osainwa nemamwe makambani akati wandei kuita mamwe mabasa mazhinji.
Mutauro wepasirese wepamutemo
Kune rimwe divi, vadzidzi vemitauro vagara vachiedza kuchengetedza mutauro wepamutemo wepamutemo unobvumidza kutaurirana kwakanaka pakati pevanhu vese. Shanduro yemutemo yakanaka ndeiya inoitwa nemushanduri anoziva mitauro yacho miviri inobatanidzwa. Uye kwete chete kuti iye anoziva mataurire avo uye opindura zvinyoro. Asi anoziva nzira yake yekukudziridza kuti ayidudzire kuitira kuti mumitauro yose iwoyu chinhu chimwe chete chingataurwa.
Shanduro dziri pamutemo dzinoenderana zvachose nezvechimiro chechinyakare uye ndechimwe chinhu icho nyanzvi dzese dzinowirirana. Kunyora chero nyaya yepamutemo kunosiyana munzira dzakawanda. Muturikiri wega wega anotakura basa rakakura sezvo asiri kungova nyanzvi dzemitauro miviri chete asi anofanira kuziva nzira yekusiyanisa nayo zvimwe zvinhu zvingangoreva chinhu icho imwe tsika isingaite. Vashanduri vane basa rekupa shanduro yakakodzera kwazvo nekuda kwemabasa ese evatengi vanobatanidzwa.
Kururamisa kana uchidudzira
Shanduro chaiyo chiitiko chakanyanya kuomarara icho chinosanganisira kusimba kwemitauro miviri iyo inogona kana inogona kusasiyana kubva kune imwe zvachose. Kunyangwe ivo vakafanana, chimiro chetsika chinogona kunge chine pesvedzero huru uye mushanduri anofanira kuziva zvimwe zviripo uye zvekare zvekare kuti akwanise kuita shanduro yakakodzera.
Kukosha kweshanduro dzepamutemo ndezvekuti panogona kunge paine mutsauko wakanangana nenzvimbo imwe neimwe, tsika uye kukosha kwemisika. Izvi zvinogona kuitika uye ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kutaurwa nevadudziri paruzhinji pavanenge vachidzidziswa kuita basa ravo mune ramangwana. Chirevo uye zvinorehwa nezvirimo zvakabatana nekushandiswa kweshoko rimwe nerimwe.
Vashanduri vepamutemo vanoita basa rakakosha kwazvo
Gwaro rakatoshandurwa zviri pamutemo mukambani uye zvakare munyika. Izvo hazvina basa kana tiri kutaura nezve emirate uye imwe, kana mapato ese ari maviri akatobvumidza, iyi shanduro yepamutemo yatove ine hunhu mukati medunhu renyika uye zvakare mune chero imwe nzvimbo iyo yakanyoreswa.
Apa ndipo apo vashanduri vepamutemo vanoita basa rakakosha kwazvo. Kune dzimwe nzvimbo dzinoshandiswa nemutemo zvingashanduka uye ndipo paanofanira kutarisisa. Gwaro rimwe nerimwe, zvisinei nemutauro warinoshandurwa, rinofanirwa kutevedzera zvinotevedzwa zviri pamutemo kuitira kuti vagone kuve neunhu hwakadai hwemitemo zvekuti hunodiwa kutevedzera mapato anopinda.
Nzvimbo yepamutemo yedudziro yave yekutanga uye izvi zvinoita kuti nyanzvi dzakawanda dzive nebasa iri. Kunyangwe kana uchitaura nezve chero shanduko mushanduro, iwe unofanirwa kubvunza magweta sezvo izvi zvichireva zvimwe zvemutemo zvinoshanda kune aya marudzi emhosva. Izvi hazvireve kuti zvinogona kuitika kuti kwakakosha kugadziridzwa kunogona kuve nemhosvo uye nekudaro zvinokanganisika nevatambi vakasiyana vari chikamu chemamiriro ezvinhu.
Maitiro ekudzivirira matambudziko panguva shanduro dziri pamutemo
Kuti udzivise chero mhirizhonga ipi neipi yekukanganisa, iwe unofanirwa kubatanidzwa nemakambani aya ane hunyanzvi mune shanduro dzemutemo. Ivo inyanzvi dzakanyatsokodzera kukupa iwe masevhisi aunoda. Makambani ekushandura zviri pamutemo akanakisa apo ivo vanopa zvitupa zvekushambadzira uye vanozivisa nezvekushandurwa magwaro zvisinei nehumambo hwauri mauri.
Ivo vatojairana nemhando iyi yemapepa epamutemo uye vachakurega kuti unakidzwe negwara rakakodzera-chiratidzo chevhisi Ivo vane hunyanzvi hwekuita zvese zvakanaka. Shanduro yakanaka ndeye iyo iyo ichakubvumidza iwe kuti uite vese avo vaisanganisira mumapepa nemudiwa uyo anenge achida kukutsigira iwe zvisinei nechero chipinganidzo. Usarasikirwa nemukana wakakura nekuti unotya kuti vangangodaro vasingazokunzwisise.
Nevashanduri vane ruzivo uye vane ruzivo, zvese zvinogoneka Usapera moyo zvakare uye tipe mukana ikozvino kuti iwe waziva kukosha kweshanduro dzechokwadi dzemutemo.
ZveMutemo Shanduro Dzekuita Made
Dudziro Yezvemitemo, Dudziro Yakawanda, Kudhinda, Kudhinda
Kududzira kwakawanda, shanduro yekurapa, hupfumi uye shanduko yemari, shanduro yekushandura, shanduro yemidhiya, kushandura webhusaiti, uye kushandura software.
Dudziro dzemutemo dzakatenderwa neUAE Ministry of Justice yeChirungu neArabic
Kugadzira MOA & MOU AOA
Kubata pasi, izwi-pamusoro, kushambadzira, uye kushandura kushambadzira
Ndizivisei kana muchida kutaura nezvekunyora kopi, Shanduro, uye kudhindisa kwemakambani.
Hunhu uye Kubata nenguva
Vakabvumidzwa kushandura masevhisi kumamiriri uye neshanduro yepamutemo masevhisi kuhurumende nemasangano akazvimirira.